Ny fampiasana vola vy ao Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fitaovana afahana mifanakalo zavatra ny vola. Tany aloha dia ny vola vy no nifandraisana teto amintsika. Nanana ny antsika manokana isika malagasy taorian’ny fahaleovantena. Ny vola vy ariary dia tamin’ny taona 1970 no nanomvoka niasa. Ny taona 1978 no namoahana ny roapolo ariary izay vola vy. Ny 1999 kosa no nanomboka niasa ny ariary folo raha toa ka ny taona 2005 ny dimampolo no nipoitra. Raha tsiahivana dia ny 2004 vao nisy ny ariary zato, vola taratasy. Ankehitriny, toa efa tsy hita eny ho eny intsony ireo vola vy telo ireo. Any amin’ny « WC publique » no mba hitondran’ny olona azy ireto raha ny ao Antsirabe, satria dimampolo ariary ny mivalandrano. Mbola mahazo ny azony anefa ny vola madinika saingy ny toetsaina mihitsy no mibaiko hoy ny filazan’ny mpivarotra enta-madinika iray. Midika fa maharitra ny vy toy izay ny taratasy noho ny faharetan’ny taona niasan’ireto vola vy ireto. Amin’izao fotoana, vokatry ny tsy fanajana sy ny tsy fitandremana dia mora simba ny vola taratasy. Azo noleferina hoy ny mpiandraikitra ny mpanjifa tao amin’ny BOA « Bank Of Africa » Antsirabe ny faharatsian’ilay vola teo aloha teo, saingy entanina hatrany hoy izy ny olona mba hikajy ny fahadiovam-bola. Nampimenomenona ny mpivarotra ihany koa, ny fidiran’ilay diman-jato manify izay misy arony mora miendaka tamin’ity taona ity. Manome vahana ny mpanao sandoka sy hosoka ny fahamaikana hanova na hanampy na hampiditra vola vaovao. Kitro ifaharan’ny toekarena ny fahambonian’ny sandam-bola, koa antony iray tsy ahafahana miala amin’ny kirizy ny fahalemen’ny ariary, hany ka sarotra amin’ny vahoaka malagasy ny hanaraka ny fiakaran’ny vidin’entana avy any ivelany. Ny mahagaga, misy mpitondra fivavahana sasany milaza fa tsy ilaina ny vola ary fototry ny ratsy, kanefa ny vola no maha rangahy hoy ny ohabolantsika malagasy. Ny masoandro ihany angamba no tsy andoavam-bola amin’izao andro iainantsika izao. Mitrongy vao homana araka ny fiteny mahazatra andavanandro.
Safidy roa malalaka
Fotoana fohy dia hanjavona sy ho foana ho azy ny vola mikorintsana. EF amaro ny toerana tsy mandray vola vy intsony fa atao entana raha misy fameriny dimampolo. Misy fiangonana kosa ao Antsirabe mandrara ny vola vy ka tsy azon’ny mpivavaka atao rakitra fa tsy maintsy vola taratasy ihany. Lasa fitadiavam-bola tokoa ny fananganana fiangonana etsy sy eroa ary miondam-bola tanteraka ny ankabetsahan’ireo mpitondra ao sy ny lohandohany amin’izany ka mahatonga ny mpitarika fiangonana sasany mandrara ny vola vy ampiasaina ho rakitra. Fitaka sy hafetsena ary fanararaotana ny finoan’ny olona mbola marefo anefa no dikany. Jambena amin’ny fahasarotam-piainana rahateo ny sasany ka mora miova fo. Izany indrindra no hamelana malalaka ny olona tsy misy an-kanavaka hiditra ao an-tranon’Andriamanitra mba hahitany fahasoavana. Porofo mazava amin’izany fahalalahan’ny tsirairay izany ny fahabetsahan’ny vola vy any am-piangonana. Maimaimpoana ny fitahian’ilay mpamonjy ary tsy mitaky na ny ariary akory izy fa kosa mila ny fahatsapanao ny tena marina sy ny finoana izy. Mandia lalan-tsarotra tokoa ny firenentsika hatramin’izay ka hatramin’izao ka ny fanafody dia tsy misy afa-tsy ny finoana ny fahatokisana an’Andriamanitra. Mbola arin-tanany avokoa na ny vola izay mampirehareha antsika aza ; tany misy ny harena rehetra i Madagasikara, dradradradraina mandrakariva, vola daholo izany, saingy aiza ? Misy ho an’ny malagasy ve ? Tomponandraikitra hitolona amin’ny tsy rariny na izaho na ianao io.
Singa ahitana ny fiovan’ny toekaren’ny firenena iray ny endriky ny vola ampiasainy. Efa nambara teo fa hanjavona ny vola vy. Midika inona izany ? Raha any amin’ny firenena ambara fa mandroso izao dia zara raha mampiasa vola vy ry zareo ary na ny vola taratasy aza dia efa mihena ihany koa satria tonga amin’ny fotoana sokajiana ho monétique izy ireo. Rahoviana izany no tonga eto ?